पापमाथि विजयको रहस्य
द्वारा लिखित : जैक पूनेन कोटिहरू : युवा भगवानलाई चिन्ने चेलाहरू आत्मा भरिएको जीवन
व्यवस्था ६.४-५ मा हामी पढ्छौँ, “हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ; अनि तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तिम्रो सारा हृदयले, तिम्रो सारा प्राणले र तिम्रो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु!
हामी तीनजना परमेश्वरको उपासना गर्दैनौं। परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ। (सन्दर्भ पापमाथि विजय हो। हामी केवल एकै परमेश्वरको उपासना गर्छौँ- त्यो पनि हाम्रो सम्पर्ण हृदय, प्राण र शक्तिले। हाम्रो सम्पुर्ण हृदय, प्राण र शक्तिले एकै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पापमाथि विजयको बाटो हो। त्रिएकत्वलाई यसरी पनि बुझ्छौँ- परमेश्वर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो तीन व्यक्तित्वहरुद्वारा प्रकट हुनुभयो- पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा)। व्यवस्था ६:५ मा यो पहिलो आज्ञालाई अर्कै तरिकाले वर्णन गरिएको छ। मत्ती २२:३७ मा येशूले यो कुरा यसरी उद्धृत गर्नुभयो: “तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, र आफ्नो सारा प्राणले, अनि आफ्नो सारा मनले प्रेम गर।” यहिचाहिँ पहिलो आज्ञा र ठुलो आज्ञा हो।
यसको मतलब यो हो किः परिवार, सम्पत्ति, जागिर वा पैसाको लागि हाम्रो हृदयमा कुनै ठाउँ छैन - किनकि हाम्रो सम्पूर्ण हृदय परमेश्वरलाई दिइएको छ। योचाहिँ "निर्माताको निर्देशन" भनिने पुस्तिकामा पाइने निर्देशन नं.१ जस्तो हो। जसमा यसरी लेखिएको हुन्छः “तपाईंले यी आदेशहरुको पालना नगरी यो मानव निर्मित मेसिन नचलाउनुहोस्।“
प्रभुलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्दा के हुन्छ?
•	तपाईं आफ्नी पत्नीलाई अझै बढि प्रेम गर्नुहुन्छ।
•	तपाईंले आफ्नो छिमेकीलाई अझ धेरै प्रेम गर्न सक्नुहुनेछ।
•	तपाईंले आफ्ना शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुनेछ, किनकि अबदेखि उसो तपाईंको हृदयमा कुनै घृणा हुँदैन। ईर्ष्या, घृणा, तीतोपना र अरूको विरुद्ध गरिने सबै पापहरू तपाईंले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम नगर्नाको कारणले आउने गर्छन्। जुन हृदयले तपाईंले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ, त्यो ईर्ष्याले भरिएको छ। हामी पापसँग प्राथमिकताका साथ लडेर होइन तर आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गरेर पापलाई जित्न सक्छौं। जब हामी परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्दछौं, तब पैसा र सम्पत्तीको प्रेम र दुष्ट अभिलाषाहरू सबै हराउँछन्।
श्री ‘क’ लाई माया गर्ने एउटि केटीलाई विचार गर्नुहोस्, जो त्यति राम्रा व्यक्ति होइनन्। उनका अभिभावकले उनलाई त्यो व्यक्तिलाई माया गर्न रोक्न सक्दो प्रयास गरे तर उनीहरू सफल हुन सकेनन्। एकदिन त्यस केटीले श्री ‘ख’ लाई भेटिन् जो अझ सुन्दर, धनी र बढी रमाइलो व्यक्ति थिए। एकाएक उनको श्री ‘क’ सँगको सबै प्रेम हरायो। त्यो कसरी भयो? यसलाई "नयाँ प्रेमको निष्कासन गर्ने (प्रतिस्थापन गर्ने) शक्ति" भन्न सकिन्छ। यसरी एउटा नयाँ प्रेमले पहिलो वा अघिल्लो प्रेमीलाई बाहिर निकाल्यो।
यसलाई हाम्रो जीवनमा लागू गरौँ। यहाँ तपाईं परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको धेरै अभिलाषाहरूको पछि लागिरहनुभएको छ। तपाईं यी नराम्रो बानीहरू छोड्ने प्रयास गरेको गरेकै गर्नुहोस् तर सक्नुहुन्न, किनकि तपाईं ती अभिलाषाहरु मन पराउनुहुन्छ। तब एकदिन, तपाईले येशूको महिमा हेर्नुहोस्, अनि तपाई परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्न थाल्नुहोस्, के हुनेछ ? यो नयाँ प्रेमले ती पुरानो प्रेमहरु निकालेको हुनेछ। त्यसपछि हामीलाई यस संसारको कुरामा कुनै चासो हुँदैन। यहि "नयाँ प्रेमको निष्कासन गर्ने(प्रतिस्थापन गर्ने) शक्ति" हो। यो नै पापमाथि विजयको रहस्य हो। परमेश्वरलाई तिम्रो सारा हृदय र आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर - जसको अर्थ तपाईंको आफ्नो सम्पुर्ण बौद्धिक सामर्थ सहित हो।